> Resource > Samsung > Sida loo rakib Adobe Flash Player u Samsung Galaxy
About sanad ka hor, Adobe go'aansaday inay joojiyaan taageerada ee Flash madal ay Android. Sidaas darteed haddii aad isku daynay daawashada video ah oo u baahan in Adobe Flash Player lagu rakibay on your Samsung Galaxy, dhihi Amazon Video Instant iyo South Park Studios, laga yaabaa inaad ka heli kartaa ah "Flash Player aan la rakibo" fariin.
Si aad u xaliyaan dhibaatadan, waxaan doonayaa inaan idin tuso sida loo soo dajiyo Adobe Flash Play on qalabka Samsung Galaxy aad. Tani waxay aad u awood u siin doona in ay daawadaan Flash videos ama ciyaaro qaar ka mid ah kulan Flash ku salaysan filaayo.
Tan iyo Adobe Flash mar dambe ma heli karaa Google Play Store yahay, waxaa laga yaabaa in aad u tagto Menu Settings Ammaanka iyo hubi "ilo aan la garanayn si loo soo dajiyo codsiyada xisbiga 3aad. Mar kale in aad u gab karaa ka dib markii aad samaysay.
2 Download Flash Player ka Adobe ee Archive Site
Nasiib wanaag, Adobe hayaa archive ah nuquladii hore ee ay software. Sidaas ka aad ka soo dejisan kartaa ciyaaryahan flash this site . Guji link ka aad telefoon soo bixi nuqulka ugu dambeeya ee Adobe Flash Player APK file.
3 Ku rakib Adobe Flash ah ee aad taleefan
Ka dib markii ay soo degsado APK ah, meel kasta oo aad ka heli dhigo file ka. Markaasaa waxaa u soo dajiyo sida app kasta oo kale, ka dibna aad ka ogaan doonto in Flash Player muuqan doona aad app khaanad. Laakiin uma baahnid inaad isticmaasho sida plugin u baahan yahay si uu ugu tartamo gudaha ka browser ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isticmaasho Chrome u Android sida loo siiyaa biraawsarkaaga, Flash ma shaqeyn doono haddii uu ku rakiban ama aan jirin tan iyo Chrome ma taageeri plugins. Sidaas daraadeed waxaad u bixi kartaa browser kale taageera plugins, sida Firefox u Android.
Hel kale oo kaamil ah in Adobe Flash Player
Dhab ahaantii, kuwa kor ku xusan tallaabooyinka u muuqdaan kuwo wax yar ka dhib badan. Sidaas halkan waxaan ku talinaynaa kale oo kaamil ah in Adobe Flash Player- Wondershare Player u Android . Sidaa daraadeed, ma aha in aad ka soo dejisan iyo beddelo browser kale, kaliya u helaan goobta flash kasta oo wuxuu ku raaxaysan videos flash oo dheeraad ah! Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah sifooyinka ugu muhiimsan ee this media player Android. Waxaad kala soo bixi kartaa ama loo raadinayo hawlaha ka badan.
Taageerada qaabab video kala duwan sida avi, flv, mkv, avi, rmvb, mp4, filimada MOV, 720p HD oo dheeraad ah;
Isticmaal app this hal si aad u daawato videos ka goobaha video sida YouTube, VEVO, Matecafe, vimeo, iwm;
Stream videos iyo music u dhexeeya Android iyo qalab kale oo badan oo screen-;
Daawo videos kuwaas oo badbaadiyey ee computer guriga.